Miarahaba anao Razily, tsy maty fo aman’aina. Mendri-piderana tanteraka ny fihetsika nasehonao tamin’ny 28 Martsa 2009 teo Ambohijatovo. Iny no nahafantaran’izao tontolo izao anao. Ary deraina sy isaorana manokana koa ilay olona izay naka sary izany fihetsikao izany.
Miala tsiny fa izaho izay mpametraka fanontaniana dia tsy mendrika akory hanao izany eo anatrahan’ny fitiavan-tanidrazana goavana hanananao.
Q: Iza moa no tena anaranao?
R: Rakotovao Andrianarivelo Edmond
Q: Ahoana no nahatonga ilay hoe Razily?
R: Tsy dia haiko loatra fa anarana nentiko hatramin’ny faha kely, angamba avyamin’ilay volana nahaterahako, izay volana jolay (july), dia mety hoe ra(july)
Q: Fa oviana ianao no teraka?
R: Ny 22 Jolay 1962 ( 47 taona)
Q: Mbola velona ve ny ray aman-dreninao?
R: Mbola velona fa efa nisara-toerana, ny dadako dia mbola any an-tananay any, any Madiokely, faritra « limitrophe entre » Miandrivazo-Madoto, mampisaraka ny faritra Antananarivo sy Tuléar
Q: Inona no tena nahatonga anao nanao iny fihetsika iny?
R: Tsotra, Ho an’ny tanindrazana. Nisy ny niteny sy nandrara ahy foana tamin’ny tolona hoe mba jereo ny ankohonanao fa aza manao an’izao, fa ny ahy tsotra ihany, na ilay zanako kely aza dia efa nilazako hoe na ho faty na ho velona dia ho an’ny tanindrazana.
Q: Oviana no nitsiry tao aminao izay fitiavan-tanindrazana izay?
R: Izaho dia efa ela no mahare maharary raha vao misy zavatra tsy mety ato amin’nyfirenena. Ohatra fotsiny, tamin’izaho mbola scout, kiady tamin’izany dia ny miaro ny environement no isany nahafinaritra ahy ary mitomany mihitsy aho rehefa misy mandoro tanety ary miezaka manazava amin’ny olona ny maha-ratsy izany doro-tanety izany.
Q: Inona no finoanao?
R: Mpino Kristianina aho, tao @ loterana District Antanambao Ambary, communeMandoto, dia niezaka ny hanangana ny FJKM Madiokely taty aoriana
Q: Afaka mirehareha ianao t@ fihetsikao ho an’ »ny firenena malagasy.
R: Tsia Jehovah ihany no reharehako
Q: Efa nanao miaramila angaha ianao?
R: Tsia, mba naniry aho ary efa notsaraina (1982) fa nohon’ny antony budget hono dia tsy voaray mihitsy
Q: Manambady aman-janaka ve ianao?
R: Manambady niteraka telo
Q: Iza no anaran’ny vadinao?
Q: Inona no asan’ny vadinao?
R: Mivarotra eny Analakely izy.
Q: Iza avy ireo zanakao? ny taonany?
R: Hasina, 14 taona,lahy; i Aina, 9 taona,vavy; ary farany i Lova, 8taona, lahy.
Q: Mianatra daholo ve ny zanakao?
R: Eny, mianatra daholo, ao amin’ny EPP Soarano
Q: Mba tantarao aminay ilay tamin’ny 28 mars 2009,
Q: Fantatrao ve anefa ny zavatra hanjo anao eo anatrehan’ireo miaramila feno habibiana.
R : Fantatro fa ny tao an-dohako dia ny hoe fotsiny: ho an’ny tanindrazana
Q: Inona no tao anatin’ilay kitapon’ny mpianatra nataonao fiarovana?
R: Saina, satria mivarotra an’io sainam-pirenena io no isany fitadiavana ataoko.
Q: Firy ianareo no voasambotra tany?
R: Efatra izahay fa ny iray navotsitry ry zalahy fa TGV
Q: Iza ireo namanao anakiroa?
R: I Stephane sy Olivier
Q: Hitanao ve no misy azy ireo?
R: Tsia. tsy nifankahita intsony izahay taty aoriana
Q: Rehefa voasambotra ianareo dia nanao ahoana?
R: Ireny hitanareo ireny, nodakadakana sy nodarohana fa ny tena nampalahelo dia ny teny maharary sy ny latsalatsa, ompa ratsy sns…
Q: Nentina taiza ianareo avy teo?
R: Nentina tany Betongolo izahay dia avy eo teny amin’ny Fort Duschesnes dia avy eo naverina teny Betongolo.
Q: Ahoana no nilazana ny tany an-trano?
R: Ny zanaky ny zaodahiko no nahita ahy tamin’ny télé hono angaha dia nilaza tany hoe lasan-ny miaramila any i Dadafara.
Q: Nampijaliana ve ianareo tany amin’ny camp? Ary nomena sakafo?
R: Tsy nampijaliana izahay tany Betongolo fa tsy nisy sakafo ho anay tany, ny alahady vao nanatitra mofo sy akondro ho ahy ny vady aman-janako
Q: Dia ny tohiny?
R: Alatsinainy izahay niakatra parquet taty Anosy dia nolazaina teo fa mankorotana fanjakana sns dia nalefa teny Antanimora.
Inona no dikan’ily fihetsikao somary nanao demi tour dia nanao famindra miaramila iny?
R: Nitodika farany taty aoriana aho sady niteny tamin-dry zalahy namana hoe lasa aho fa tsy mihemotra intsony ho an’ny tanindrazana.
Q: Oviana ianareo vao nivoaka teny?
R: Izahay ny Alakamisin’iny izany hoe ny 02 Avril dia efa nivoaka.
Q: Fa taiza ianao hatramin’izay? Be ny olona nanontany anao.
R: Izaho vao nivoaka dia nisy fahoriana nanjo satria maty ny rafozako dia nandaoan’Antananarivo aho aloha nikarakara izay, tsy fantatro ny hoe misy olona manontany ny momba ahy na fantatry ny olona akory ny fisiako, ary ny Alakamisy farany teny Ambohijatovo iny aho vao hitanareo indray dia manohy ny tolona , mandeha an-tongotra isan’andro aho mamonjy ety amin’ny Magro na Ambohijatovo
Q: Taiza ianao no nianatra ary inona no fianarana vitanao
R: Izaho tsy nahavita fianarana lavitra fa kilasy fahafito dia nijanona fa nasain’nydadabe-nay niandry omby, kanefa na izany aza dia mezaka foana aho mianatra ho an’ny tenako, ary mahafantra ny internet ihany aho, ary miezaka namaky momban’nylalam-panorenana ary izay no tsy nanekeko ity fitondrana fanongam-panjakana ity. Ny vadiko Fara kosa anefa dia nahavita ny kilasy terminales ary izy dia amporisihiko hatrany hiezaka bebe kokoa.
Q: Inona no zavatra tianao? fialam-boly na hafa?
R: Ny maka sary no tena tiako, ary mpanao gazety no asa tiako natao. Nanana fakan-tsary Zenit vita sovietika izay aho ary efa nisy koa fotoana nanaovako anton’asa ny fakana sary kanefa efa nandroso ny teknolojia ary ny fiainana miha-sarotra dia namidiko izany satria lafo ny pellicule ary tsy rentable.
Q: Inona no laoka tian-dRazily indrindra?
R: Ny akoho gasy
Q: Ny teninao faranay
R: Mitohy ny tolona ary tsy mimpody!!Ho an’ny tanindrazana
- gazety tia tanindrazana
- scout fjkm
- tia tanindrazana